Ihe E Kpebiri N’ụlọikpe Dị na Pam dị na Rọshịa: “Anyị Anọghị n’Afọ 1937”
Okwu Ikpe Gbasara Ndịàmà Jehova Nọ na Rọshịa
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Zulu
FEBỤWARỊ 11, 2013
“Anyị Anọghị n’Afọ 1937”
N’abalị iri na isii n’ọnwa Eprel afọ 2012, n’obodo Pam dị n’ebe etiti Rọshịa, e kpere Onyeàmà Jehova a na-akpọ Aleksandr Solovyov ikpe ma gwa ya na ọ ga-akwụ 1,000 rọbụl (ya bụ, ihe dị ka ₦4,650) maka na ọ kpọkọtara ndị mmadụ, ha ana-efe Chineke n’otu ụlọ ezumezu ha kwuru ụgwọ ya. Ha sịrị na iwu akwadoghị ihe a o mere.
Mgbe ọkàikpe e nwere n’ógbè ahụ gechara ihe ha sịrị na ọ bụ ya gosiri na Solovyov dara iwu, ọ kagburu ihe ụlọikpe kpeburu ikpe ahụ kpebiri, kagbuokwa ụgwọ ahụ a sịrị ya kwụọ.
Ọkàikpe ahụ gụpụtara ihe ụlọikpe kpebiri, tụgharịzie gwa Onyeàmà Jehova ahụ ikpe laara, sị: “ N’agbanyeghị na ọ na-abụ iwu anyị kwuo otu ihe ebe a, ya ekwuo ihe ọzọ n’ebe ọzọ, n’agbanyeghịkwa na e nwere ndị kpọrọ ihe unu na-eme asị, anyị anọghị n’afọ 1937 bụ́ mgbe ọ na-abụ anyị hụchaa eziokwu anyị ekpuchie ya. Ekpere m bụ ka ihe ndị unu na-akụzi, na ihe ndị unu na-eme mee ka e nwekwuo ndị ezigbo mmadụ na ndị na-akpa àgwà ọma n’obodo anyị. ”
N’ọnwa Julaị afọ 1937, onye ọchịchị Sọviet Yuniọn aha ya bụ Stalin nyere iwu a na-akpọ Iwu 00447. Iwu ahụ mere ka egwu dị n’oge ahụ. A na-ejide ndị e weere na ha kweere n’ihe dị iche ma kpee ihe ikpe na-enweghị isi na ọdụ. Akwụkwọ ndị gọọmenti gosiri na e si otú ahụ mee ka ọtụtụ puku mmadụ gaa rụwa ọrụ n’ogige ịta ahụhụ, sikwa otú ahụ maa ihe karịrị narị puku mmadụ atọ ikpe ọnwụ ma gbuo ha.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “Anyị Anọghị n’Afọ 1937”
Ụlọikpe Kpebiri na “Anyị Anọghị n’Afọ 1937”